T-Shirt - iyona nto ezishisa outerwear. Thina wagqoka izikibha, kwenzekani imvelo, ukuphumula. Njengoba izingubo ekhaya u-80% abantu uncamela nje isikipha. Ngisho emsebenzini eziningi zalo nibabekezelela ku. Futhi t-shirts kungekho yobudala noma ubulili, noma isisindo. Yena uthanda izingane, izinsizwa, abesifazane ngisho nasebekhulile. Siyabonga ngempumelelo wacosha isikipha, sibalo womnikazi wayo bangaba leaner, sportier, sexier. Ngakolunye uhlangothi, isitayela kahle ekhethiwe noma usayizi kungaba banyakamisa ngisho ubuhle ephelele kakhulu. Kanjani ukukhetha ubukhulu kwesokudla izikibha?
Ngokuvamile sibona kwilebula: usayizi M, usayizi L, noma XXXL ngisho ezipholile. Zimeleleni lezi izincwadi? Mhlawumbe M - kuyinto encane, kodwa ubukhulu L kuyinto lokho? Noma ngabe zinkulu noma ophansi? esabise nakakhulu izincwadi ukubukeka XXXL. Kodwa, njengoba Carlson elikhulu: "Calm, kodwa wehlisa umoya". Kuyinto pretty elula.
Ukunquma ngokunembile ubukhulu oyifunayo t-shirts, sisebenzisa abavamile wokulinganisa tape. Ngakho, bopha tape emhlabeni esifubeni sakhe. Manje bheka ngokucophelela endaweni ekuqaleni uxhumano tape ngesilinganiso kuso. Inombolo oyisebenzisayo lapho, futhi kuyoba ukhiye wakho ukuze ekutholeni usayizi izikibha.
Ake sithi kummeleli isigamu amahle. Ngu yokulinganisa girth esifubeni, ubona inombolo 76 cm. Lokhu kusho ukuthi lokho ngeke ivumelane ihembe usayizi XS noma 40-42 ngezindinganiso Russian. Uma ungase ubone inani ayisishiyagalombili, khona-ke nakanjani kudingeka ukuthenga S (44-46) Usayizi wesikibha. Uma selilonke ilingana amasentimitha ayisishiyagalombili nesishiyagalombili ngokuphepha ukuthenga usayizi M (noma 46-48). T-shirt usayizi L sifana Russian 48-50. usayizi L ungakwazi ukuthenga uma selilonke esifubeni sakho ivela ayisishiyagalombili nesishiyagalombili ukuba amasentimitha ayengamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha. Ngezinye 97-100 cm - amahembe sayizi 50-52 noma XL, 101-104 at -52-54 cm noma XXL.
Uma ungowesilisa, wena kufanele aqondiswe ngesilinganiso ukuhluka. Izinhlamvu ezisetshenziswa ekunqumeni Usayizi efanayo, kodwa uchungechunge inombolo Kuthi ezahlukene. Ake sihlole kabanzi.
Nesilinganiso esifubeni selilonke amadoda yabonisa 98 amasentimitha, uyazi ukuthi ngeke ivumelane ihembe usayizi S (noma 44-46), 99-100 cm - usayizi M (noma 46-48). Usayizi L (noma 48-50) iyohlala kahle lo muntu esifubeni girth asukela 101 kuya ku 110 ngamasentimitha. Shirt usayizi XL izohlangana Russian 50-52 esifubeni obungazungeza 111 kuya ku-118 cm On the ezinkulu noma XXL (52-54) Kudingeka ukuthenga indoda enesiqu esingaphezu kwamamitha esifubeni engekho ngaphezu kuka-122 cm Noma olukhulu kunalolu inombolo - .. XXXL futhi njengoba besho, "kufanele kuhlaziywe."
Uma ungenayo i-tape izinyathelo noma ungafuni ukusihlupha izilinganiso futhi okungu, nje sibheke usayizi ilebula yimpumelelo kakhulu t-shirt. Uyabona, isibonelo, L ubukhulu, ukhethe into esitolo of usayizi ofanayo. Cishe ukuthi ngeke ivumelane kangcono. Nokho, ungakhohlwa ukuthi stroprotsentnuyu ekuqinisekisa Gap ungenziwa kuphela fitting isikipha oyithandayo. Ngisho noma kufanele kabusha ukukala angaphezu kweshumi nambili izikibha e futhi awalingani ezahlukene, into kahle bayowusebenzisa ukukhokhela yonke imizamo yenu. Mhlawumbe kule thebhu okuzayo kwalokhu ethile isikipha uzokutshela uzokhetha yobukhulu. Yiba yezitolo mnandi kuwe!
Izigqoko zaseMpumalanga: konke okudingayo ukwazi ngale ngubo
Yini ukugqoka oluhlaza jacket Amathiphu
Khetha ifoni yakho: abakhiqizi phezulu Smartphones
Amakhono Computer kanye nendima yabo umsebenzi